विश्वकप २०२२ को लागि कतारले नेपाली सुरक्षागार्ड भर्ना गर्दै, यस्तो छ तलब र छनौट प्रकिया..? – List Khabar
Home / समाचार / विश्वकप २०२२ को लागि कतारले नेपाली सुरक्षागार्ड भर्ना गर्दै, यस्तो छ तलब र छनौट प्रकिया..?
विश्वकप २०२२ को लागि कतारले नेपाली सुरक्षागार्ड भर्ना गर्दै, यस्तो छ तलब र छनौट प्रकिया..?
admin December 24, 2021 समाचार Leaveacomment 208 Views
कतार :फीफा विश्वकप २०२२ को लागी कतार रोजगारमा सामेल हुने राम्रो अवसर आएको छ। श्रम मन्त्रालय २०२२ विश्वकप फुटबल २०२२ को सफल आयोजनाको लागि नेपाली परिचालन गर्ने भएको हो ।
Previous भर्खरै विवाह गरेकी गायिका प्रविशाको यस्तो भिडियो बाहिरियो (भिडियो सहित)
Next पुस ३० गते बिहानैदेखि देवघाटमा यातायात बन्द